Aluhlaza okwesibhakabhaka Sekuyisikhathi eside sasimthanda abathandi nama-dessert elimnandi. Ngemva bayobhaka nale berry eyatholakala ezihlwabusayo kakhulu. Namuhla sinikeza ukuthola indlela ukupheka ikhekhe nge aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngoba lokhu berry Thenga fresh ayikwazi yonke indawo, in the zokupheka sisebenzisa it in a ifomu eqandisiwe. Lo mkhiqizo edayiswa ezitolo zendawo kakhulu ngentengo ezingabizi kakhulu.
Blueberry ikhekhe recipe
Uma ufuna ukuba aphathe imikhaya yabo noma dessert esimnandi, kodwa ungafuni ukuchitha isikhathi esiningi elungiselela ke, usebenzise lokhu. Futhi sidinga izithako ezilandelayo: amaqanda 4, 150 amagremu ushukela, ibhotela kanye ufulawa, isigamu isikhwama se-baking powder kanye 10 amagremu vanillin. Wale mikhiqizo, sizobe nokulungisa inhlama. Futhi, sizodinga 80 amagremu ushukela oluyimpuphu, 1 amaprotheni futhi umbhangqwana wezipuni kalamula ngokuba nopende ocwebezelayo.
Ikhekhe nge aluhlaza okwesibhakabhaka (izithombe ingabonwa isihloko) I-leresiphi silula. Ukuze uqale eneqhwa amajikijolo ku-microwave noma ngendlela engokwemvelo. Othambile ibhotela ukusabalala izitsha ezincane emaceleni okusezingeni eliphezulu. Engeza i-vanilla ushukela beat ubebushelezi. Bese ufaka iqanda uphehle futhi. Endishini ehlukile uthele kwesigamu ufulawa. Engeza powder baking ukuze inhlama uhlanganise. Gilazi isisindo Iqanda-uwoyela iwe ufulawa elele. Siqala ingxenye ukuthi ibilokhu ixubene baking powder. Ngokuphelele uphehle.
Ifomu esiphila ubhake Muffin nge aluhlaza okwesibhakabhaka, lubricating uwoyela nofulawa omncane ozo- fafaza. Ezansi a mncane ungqimba ukusabalala test. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi izithelo akusho Ngafaka phansi ngesikhathi ukubhaka. Esikhathini inhlama esisele ukwethula aluhlaza okwesibhakabhaka kanye isiyaluyalu. Khona-ke ulithumele ifomu. Thina aba ebusweni nge spatula bese befakwa kuhhavini degrees zangaphambi eliwu 180. Lungiselela Muffin yethu cishe imizuzu engu-50. Konke kuncike kuhhavini. Khona-ke athathe amakhekhe ngomumo eyenziwe, Ake cool kancane wayihosha bunjwa. Ngenkathi ikhekhe epholisa, ungalungisa glaze. Ngenxa yale njongo uphehle amaprotheni powder kanye kalamula ukwakha mass viscous. We amboze ehla naye. Konke! dessert yethu ilungele ukuzithoba etafuleni.
Muffin nge aluhlaza okwesibhakabhaka kule yogurt e multivarka
Sinikeza ukunakwa kwakho iresiphi ezithakazelisayo kakhulu ukuthi kalula ukulungiselela abanikazi ekhishini abasizi emangalisayo. Futhi ukubhaka Muffin, ngeke nje kuphela ufulawa, kodwa semolina. Lokhu kuyokunika isakhiwo ekhethekile imikhiqizo ukudla ngomumo.
Ukuze silungiselele amakhekhe sidinga anakekele khona izithako ezilandelayo: a pair of ufulawa cup, ababili wezipuni semolina, amaqanda amabili, 1 inkomishi (250 ml) ushukela kefir, 50 ml amafutha corn, ithisipuni baking powder, ingcosana kasawoti, isigamu isipuni soda 200 amagremu aluhlaza okwesibhakabhaka.
Isinyathelo sokuqala ukuthatha amaqanda zihlukanise obubaveza izikhupha. phehla Okokuqala kuze kube Foam ozinzile. Hlikihla izikhupha noshukela. Khona-ke ukuxhuma abamhlophe izikhupha phehla. Engeza i-bhotela ne-yogurt. Hlanganisa futhi. Endishini ehlukile ukuthumela ufulawa, semolina, baking soda, usawoti kanye baking powder. Khona-ke ukuhlunga lezi izithako ingxube ketshezi. Govuza kuze kube uqweqwe abushelelezi. Inhlama ekugcineni kufanele abe ukuvumelana thick ukhilimu omuncu. Engeza aluhlaza okwesibhakabhaka futhi ngobumnene ugovuze kuye. Bowl Multivarki lubricating amafutha. Beka inhlama ibe ke. Muffin Blueberry e multivarka uzilungiselele imodi batch imizuzu 60. yokusaswidi kulandelwa cool kancane, afafaze phezulu nge ushukela oluyimpuphu uhlobise nge amajikijolo. Manje ungakwazi uhlale phansi ukuze baphuze itiye nge okumnandi uswidi.
ikhekhe Blueberry ukhilimu omuncu
Ukuze silungiselele le dessert esimnandi, sidinga lezi izithako: 200 amagremu kafulawa, 50 ml amafutha yemifino (i amgcobe ifomu), amaqanda amabili, 200 ml ukhilimu omuncu, ababili amathisipuni of vanilla akhiphe, kwengxenye isipuni of baking powder inhlama, 170 amagremu ushukela 120 amagremu aluhlaza okwesibhakabhaka. Sizophinda sisebenzise posypku shtreyzelnuyu. Lungiselela kungaba kusuka 40 amagremu kafulawa, 15 amagremu ibhotela esilinganayo ushukela.
Ngakho, siqala ukwenza ikhekhe bethu aluhlaza okwesibhakabhaka. Seva ufulawa ne bhotela Imi ku cubes. Engeza izithako ezisele for inhlama. Govuza. Ngenisa aluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni, hlanganisa izithako ze shtreyzelnoy uphole. Ifomu lapho kuhloswe ukuba abhake dessert kufanele zimanziswe. Beka inhlama phezulu bese wengeza posypku. Bhaka umkhiqizo Culinary kumelwe abe imizuzu mayelana amahlanu ngesikhathi 180 degrees. Uma ufuna ukwenza i-Muffin la Carte, ungasebenzisa Muffin netikotela.
Kuyini "svidomye" futhi njengoba lelo nkulumo ihunyushwe ngokuthi?